के तपाईंको व्यवसायले सामाजिक मिडिया शिष्टाचारको सर्वश्रेष्ठ अभ्यासहरू अनुसरण गर्दछ? | Martech Zone
सोमबार, अगस्ट 25, 2014 Douglas Karr
सामाजिक मिडिया शिष्टाचार... अभिव्यक्तिले मलाई अल्छी बनाउँछ। यस्तो लाग्दछ कि त्यहाँ कोही कोही छ आजका सबै चीजका लागि नियमहरूको सेट लागू गर्न कोशिस गर्दैछन् म यो खडा गर्न सक्दिन। अवश्य पनि त्यहाँ अस्वीकार्य व्यवहार अनलाइन र अफलाइन छन् ... तर प्लेटफर्मको सुन्दरता भनेको यो कि यदि तपाईंले तथाकथित अनुसरण गर्नुहुन्छ वा गर्दैन नियमहरू, तपाइँ परिणामहरू देख्नुहुनेछ।
यहाँ एक उदाहरण छ ... म ट्विटरमा एक ठूलो ईमेल सेवा प्रदायकको अनुसरण गर्दछु र उनीहरूले मलाई दुई पटक आउँदो सम्मेलनको लागि ठूलो फ्याट विज्ञापनको साथ डीएम गरे। मैले यो विज्ञापनको आशा गरेन न त मैले विज्ञापनमा अनुमति दिने अनुमति दिएँ, त्यसैले यो तर्क गर्न सकिन्छ कि तिनीहरूले मलाई स्प्याम गरे - क्रममा विडम्बनापूर्ण। केहि मान्छेहरू रक्तपातपूर्ण हत्याको चिच्याउन सक्दछन् जुन कम्पनीको जगमा अनुमति आधारित मार्केटिंगमा आधारित कम्पनीले सबैको ट्विटर ईनबक्समा केहि सोध्न सकेन जुन उनीहरूले सोधेनन्। मैले गुनासो गरिन, मैले विज्ञापनलाई मात्र बेवास्ता गरें।
र त्यसपछि मैले आश्चर्य गरे ... यसले काम गरे? यदि प्रश्नमा रहेको कम्पनीले यस स्प्यामलाई दबाएर केहि अनुयायीहरूलाई रूपान्तरण गर्न सक्षम भयो र परिणाममा कुनै गुनासो भएन वा मान्छेहरू खोला नलागे, यसले केहि चोट पुर्‍यायो? यो शिष्टाचारको साथ समस्या हो, यो नियमहरूको एक सेट लागू गर्दछ जुन कि कुनैले पनि सहमत नगरेको एक समस्याको प्रबन्ध गर्नका लागि अवस्थित छैन। म शिष्टाचार नियमहरू पछ्याउँदिन, न म कहिले गर्दिन। म मेरो आफ्नै नियमहरूको सेट अनुसरण गर्दछु र व्यक्ति खुशीले मलाई अनुसरण गर्न सक्छन् वा मलाई नपछ्याउनुहोस् उनीहरूले ईच्छा गरे अनुसार (र उनीहरूको केही केहि गर्दैन!)।
यो टोलफ्री फारवर्डिंगबाट इन्फोग्राफिक प्रत्येक सामाजिक प्लेटफर्म र शिष्टाचार बाहिर प्रत्येक संग जान्छ। चाहे तपाइँ तपाइँको ह्यासट्याग ट्विटर र इन्स्टाग्राममा झगडा गर्न वा पिनटेरेस्टमा तपाइँका स्रोतहरू ठीक गर्न आवश्यक छ, यी नियमहरूको पालना गर्नुहोस् र तपाइँ आफैंलाई एक खुशी, सन्तुष्ट सामाजिक अनुसरणको साथ फेला पार्नुहुनेछ!
अनुरूप छैन सामाजिक मिडिया शिष्टाचारको नियम अधिक एक्सपोजर र, सायद राम्रो नतिजाको साथ व्यापार प्रदान गर्न सक्दछ। तिम्रो के बिचार छ?
टैग: फेसबुकफेसबुक शिष्टाचारगुगल प्लसGoogle +गुगल + शिष्टाचारLinkedInलिंक्डिन शिष्टाचारPinterestpinterest शिष्टाचारसामाजिक मिडिया को नियमहरुसामाजिक मिडिया उत्तम अभ्यासहरूसामाजिक मिडिया शिष्टाचारसामाजिक मिडिया शिष्टाचार सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरूसामाजिक मिडिया नियमहरुtwitterट्विटर शिष्टाचार
सेप्टेम्बर 6, 2014 मा 1: 31 AM
Ya राम्रो कि तपाईंको इन्फोग्राफिक्स को माध्यम बाट प्राप्त रमाईलो थियो साथै धेरै धेरै जानकारीपूर्ण !!
र म तपाईंसँग पोष्ट साझा गर्नका लागि तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु !!